Wasiiru dowlaha Arimaha Dibadda DFS oo la kulmay Madax ka tirsan Dalka Cuman – SBC
Wasiiru dowlaha Arimaha Dibadda DFS oo la kulmay Madax ka tirsan Dalka Cuman
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Dr. Mohamed Nur Ga’al ayaa kula kulmay Magaalada Muscat ee Saldanada Oman Ra’iisul wasaare kuxigeenka wadankaasi Fahd bin Mahmoud al Said oo ay ka wada hadleen kobcinta iskaashiga taariikhiga ah ee u dhaxeeya labada dal .
Kulanka oo qaatay muddo Laba saacadood ah,loogana hadlay qodobo la xiriira dhinacyada siyaasadda , dhaqaalaha , tababaridda diblomaasiyiinta Soomaaliya iyo arrimo kale , ayaa intii wadahadalku socday waxa uu Wasiiru dowlahaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga uu gudbiyay dhambaal uu ka siday Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku socday Suldaanka Cumaan,Suldaan Qaabuus Bin Saciid.
Dr. Gacal ayaa waxa uu muujiyay dadaalka Xukuumadda Soomaaliya ay ku dooneyso dib u dhiska dalka oo ay dagaalo sokeeye burburiyeen mudadii 21-ka sano ee ugu dambeysay,isagoo uga mahad celiyay taageerada Saldanada Cumaan ay u fidiso Soomaaliya .
Kulanka ayaa waxaa kale oo ay kaga wada hadleen xiriirka walaaltinimo ee labada dal ee walaalaha ah u dhaxeeya iyo qaabkii loo xoojin lahaa iyo arrimo kale oo ku saabsan horumarada laga gaaray Afrika iyo caalamka intiisa kale .
Ra’iisul wasaare kuxigeenka saldanada Cumaan Fahad bin Maxamuud Aala-saciid ayaa waxa uu gaarsiiyay Wafdiga dowladda Soomaaliya salaan uu ka siday Suldaan Qaabuus oo u rajeeyay Madaxweynaha, Shacabka iyo dalka Soomaaliya intaba deganaansho iyo barwaaqo.
Kulanka ayaa waxaa goob joog ka kala ahaa Safiirka Soomaaliya ee dalka Cumaan Xasan Maxamed Siyaad Barre iyo Yuusuf Bin Calawi oo ah Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Saldanada Cumaan .
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Dr. Mohamed Nur Ga’al iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa sii joogi doona dalkaasi muddo maalmo ah .
Dhinaca kale , Wasiiru dowluhu wuxuu kulan la qaatay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Cumaan Yusuf Bin Alawi oo ay ka wada hadleen qaabka ugu haboon ee Lagu horumarin karo xiriika iskaashi ee soo jireenka ah ee u dhexeeya labada dal, iyadoo wuxuu a wadahadalku ku dhamaaday jawi is faham leh .